ယနေ့ခေတ်တိုင် လူတွေမသိဘဲ အသုံးပြုနေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ Oiran တို့ရဲ့သီးသန့်အသုံးအနှုန်း? - JAPO Japanese News
ယနေ့ခေတ်တိုင် လူတွေမသိဘဲ အသုံးပြုနေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ Oiran တို့ရဲ့သီးသန့်အသုံးအနှုန်း?
ဟူး 05 Jan 2022, 16:32 ညနေ
ဂျပန်စကားကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်မြောက်ပြီး အန်နီမေးရှင်းကိုလည်းကြိုက်တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တို့…
Oiran ရဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကြားပြီး “ နားမလည်တော့ဘူး” ဆိုပြီးဖြစ်ဖူးပါသလား?
ဒီလိုအသုံးအနှုန်းမျိုးကို ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းမှာတော့ သင်ပေးမှာမဟုတ်ဖူးနော်?
မိန်းကလေးတွေချည်းပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ 遊廓Yukaku လို့ခေါ်တဲ့ ဆောင်းကြာမြိုင်ဟာ အဲဒိုရဲ့ Yoshiwara အရပ်မှာရှိခဲ့တာကြောင့်၊ Oiran အသုံးအနှုန်းဟာ ဒေသိယစကားမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
あち、わっち　→　私
ありんす、ござりんす　→　です。
ござりんせん →　〜ではありません。
おさればえ →　さようなら
なんざんす？ →　なんですか？
いいなすんな →　言わないでください。
ဒါဆိုဘာကြောင့်၊ တိုကျိုမှာဒီလိုအသုံးအနှုန်းတွေ ထွက်ပေါ်လာရပါသလဲ?
အကြောင်းကတော့ ဒေသိယစကားကို လျှို့ဝှက်ချင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
遊廓Yukaku မှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ကျေးလက်ဒေသအမျိုးမျိုးကနေ တက်လာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လေယူလေသိမ်း ပြင်းထန်သူတွေလည်းရှိပေမဲ့၊ Yukaku မှာတော့ မိမိရဲ့ဇာတိနေရပ်ကို မဖော်ပြခြင်းက သွယ်ဝိုက်တဲ့စည်းကမ်းဖြစ်တာကြောင့်၊ ပုံမှန်အတိုင်းစကားပြောလိုက်မယ်ဆို လေယူလေသိမ်းက ပေါ်သွားပါတယ်။
နောက်ပြီး ဇာတိကိုလျှို့ဝှက်ချင်ရုံသာမကဘဲ၊ လေယူလေသိမ်း အတော်ဆိုးဆိုးတွေရှိတာကြောင့်လည်း လျှို့ဝှက်ထားလိုက်ကြပါတယ်။
အဲဒိုအသုံးအနှုန်းကို ကြိုးစားပြီးလိုက်ပြောကြည့်ရင်တောင် တစ်လုံးနှစ်လုံးပြောရုံနဲ့ အကုန်ပေါ်ကုန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အထူးသီးသန့်စကားလုံးကို အသုံးပြုလိုက်ရင်တော့၊ ၎င်းကထူးဆန်းနေသလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရခက်သွားတာကြောင့်၊ ဟောဒီ Oiran အသုံးအနှုန်းဟာ မွေးဖွားလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကိုပါးစပ်ထဲမှာစွဲသွားပြီး၊ “かっこいい言葉” ဒါကိုသိတဲ့လူက စတိုင်ကျတဲ့လူပဲဆိုပြီး သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ playboy တွေပဲပေါ့…
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလို Oiran စကားဟာ လက်ရှိမျက်မှောက်ခေတ်မှာလည်း အသုံးပြုနေကြသေးတယ်ဆိုတာကို သိပါသလား?
ဥပမာ ဆူရှီဆိုင်တွေမှာပြောကြတဲ့ “あがり” ဆိုတဲ့စကားလုံး…
ဒါက お茶 Ocha ကိုပဲဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေတော်တော်များများသိကြတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပေမဲ့၊ ဒီဝေါဟာရဇစ်မြစ်က Oiran အသုံးအနှုန်းရဲ့ “あがり花” ဖြစ်ပါတယ်။
“あがり花” ဆိုတာ၊ Yukaku မှာလာပျော်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို နောက်ဆုံးမှာဧည့်ခံတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု モテる ဆိုတဲ့စကားလုံး..
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးသက်ရောက်ပေမဲ့၊ သူ့ရဲ့မူလကတော့ “ Yukaku ကပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးတွေက ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံတယ်” ဆိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရောက်တဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
モテる စကားလုံးကို katakana နဲ့ပေါင်းစပ်ရေးပြီး၊ ဒီနောက်ပိုင်းမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့စကားလုံးဆိုပြီး ဂျပန်လူမျိုးတော်တော်များများကတောင် ထင်ကြပါတယ်။
အခြားသော 野暮（やぼ）ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဒီဘက်ခေတ်မှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်။
センスがない (အမြင်မရှိဘူး) တို့၊ 田舎者 (တောသား) တို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ လှောင်ပြောပြောဆိုတဲ့အခါသုံးကြပေမဲ့၊ အဓိပ္ပါယ်လည်းတူလို့ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအသုံးပြုကြတယ်နော်…
အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်၊ ဒီဘက်ခေတ်စတိုင်နဲ့ပြောရရင်၊ လိင်ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့အသုံးအနှုန်းကို လိုက်ပြောကြည့်ရတာ ရေလည်မိုက်တာပဲနော်? ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတူညီပြီး၊ ခံစားမှုကတော့ ဒီဘက်ခေတ်နဲ့ တော်တော်လေးတော့ ကွားခြားမှာပါ။
အဲ့ဒီအချိန်က မိန်းကလေး ၁ ဦးဆို၊ ယောက်ျားလေးက ၁.၈ ဦးအချိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ လူဦးရေအရ အမျိုးသားထုကြီးကပိုများနေတဲ့ အဲဒိုပေါ့..
ဒါကြောင့် ဒီလိုပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေ ပေါများခဲ့တာကလည်း မထူးဆန်းဘူးလို့ဆိုရပါမယ်….
တိုကျိုမြို့တော်အစိုးရဟာ LGBTQ အတွက် အပြည့်အဝပံ့ပိုးပေးလာ။ နောက်ဆုံးအတူတူနေထိုင်ခွင့်ရတော့မည်။
ဂျပန်ရဲ့ ရွာတစ်ရွာမှာ Drone delivery အစပြုနေပြီ။….